ဂျိုးဖြူကန်ရှေ့ မျက်နှာစာတွင် မြေထိန်းနံရံ တည်ဆောက်ထားခြင်းနှင့် သွပ်ဆူးကြိုး ကာရံထားခြင? - Yangon Media Group
ဂျိုးဖြူကန်ရှေ့ မျက်နှာစာတွင် မြေထိန်းနံရံ တည်ဆောက်ထားခြင်းနှင့် သွပ်ဆူးကြိုး ကာရံထားခြင?
”မြေထိန်းနံရံ အပေါ်ဘက် ခြမ်းတွင် ခြံစည်းရိုးကဲ့သို့ကာရံ၍ သွပ်ဆူးကြိုးများ ခတ်ထားရခြင်းမှာ လမ်းမြေသားပေါ်ကျူးကျော်များဝင်ရောက်လာခြင်း မရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ထား ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်”ဟု၎င်းက ပြောသည်။ ဂျိုးဖြူရေလှောင်ကန်မျက်နှာစာတွင် မူလတည်ဆောက်ထား သော မြေထိန်းနံရံသည်နှစ်ပေါင်း ၇ဝ သက်တမ်းရှိနေပြီး အနီးတွင် သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၇ဝ ခန့်ရှိ ရေအေးစမ်းကျေးရွာရှိနေကာ လက်ရှိတည်ဆောက်ထားသော မြေ ထိန်းနံရံမှာမူလတည်ဆောက်ထားသည့် မြေထိန်းနံရံနှင့်ပုံစံမတူသဖြင့် မြေထိန်းနံရံအနီးတည်ရှိနေသည့် ရေအေးစမ်းကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများက မြေထိန်းနံရံခိုင်ခံ မှုမရှိဘဲ မြေပြိုမည်ကိုစိုးရိမ်နေကြ ကြောင်းသိရသည်။ ”ဝန်ကြီးရဲ့ဖြေကြားချက်နဲ့ မြေပြင်အခြေအနေမှန်မှာ အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိသည့်အတွက် မြေပြင်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်” ဟု ဦးတင်ရှိန်က ပြောခဲ့သည်။ ယင်းအပေါ် မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြန်လည်စစ် ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေ ကြားခဲ့သည်။